The February update kuti Windows 11 iri kutounza matambudziko.
Microsoft yakaburitswa Windows 11's yekutanga kusimudzira kunhengo dzeInsider Chirongwa svondo rapfuura, asi iwe unofanirwa kudzivirira kuiisa iyo panguva iripo. Vamwe vashandisi vaona matambudziko ekudhinda uye kupisa zvakanyanya semhedzisiro yekuwanda kweCPU mitoro mushure mekushandisa shanduro KB5010414; hapana yeiyi nyaya yaivepo isati yaisa iyo update. Maererano neBetaNews, Microsoft inoziva… [Verenga zvakawanda ...] nezve The February update kuti Windows 11 iri kutounza matambudziko.
Microsoft inotanga kuyedza Windows 11's hombe Kukadzi 2022 yekuvandudza
Microsoft nguva pfupi yadarika yakazivisa kuti iri kuronga kuburitsa zvinhu zvitsva zve Windows 11 kunze kweiyo yakarongwa yekudonha 2022 yekuvandudza. Gore rino rekutanga guru Windows 11 yekuvandudza ichaburitswa gare gare mwedzi uno uye Microsoft yatanga kuyedza shanduko idzi nevashandisi muRelease Preview uye Beta chiteshi. Kusiyana Windows 10, Windows 11 ndeye modular uye chimiro chayo chinogona kuvandudzwa ... [Verenga zvakawanda ...] nezveMicrosoft inotanga kuyedza Windows 11's hombe Kukadzi 2022 yekuvandudza